Gantuu fi Galtuun Oromoof Kora hin teessu. Ibsa Ejjennoo Miseensotaa Fi Deeggartoota QBO/ABO Magaalaa Kaalgaarii Kaanaadaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGantuu fi Galtuun Oromoof Kora hin teessu. Ibsa Ejjennoo Miseensotaa Fi Deeggartoota QBO/ABO Magaalaa Kaalgaarii Kaanaadaa.
Gantuu fi Galtuun Oromoof Kora hin teessu.
Ibsa Ejjennoo Miseensotaa Fi Deeggartoota QBO/ABO Magaalaa Kaalgaarii Kaanaadaa.
Shirri Kora Sabaa Basaastota PP fi Gantoota Kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessa Mataa Dhofkachuun Rirmi QBO keessa ta’anii turan Waajjira Muummee ABO Magaalaa Finfinneetti Kora Shiraa OPDOn Qopheeffamuun gaggeeffame kan Saba Oromoo Bakka Hin buune ta’uu isaa Uummatni Oromoo fi Sabaa fi Sab-lammiin Biyya Itoophiyaa keessa jirtan akka quba qabaatan isin beeksisuu feena.
Korri Shiraan QBO/ABO quucarsuuf Gantootaa fi bitamtoota Garaan Waamame kan daran uummata Oromoo mara Xiiqomsuu fi QBO cimsu malee kan hamilee Hooggantootaa, Miseensotaa fi Deeggartoota QBO/ABO gadi buusuu akk hin dandeenye, Gantootaa fi Bitamtoota garaa kannen hubachiisuu feena.
Murni Rirma QBO kun ABOn akka isaan yaadanitti baduu ykn diigamuu akka hin dandeenye itti dhiyeenyaan akka quba qaban beekamaa dha.
Haata’u malee, bolola Aangoo fi Maallaqa Mootummaan Itoophiyaa itti dhangalaasuu Machaahuun daba seenaan namaaf dhiifama hin goone QBO/ABO irratti Waraana Mootummaa Itoophiyaa Daahannoo godhachuun yakka QBO/ABO irratti waan raawwataniif, Nuti Miseentonnii fi Deeggartootni QBO/ABO Magaalaa Kaalgaarii gama keenyaan gochaa seer-dhabdummaa kana kan balaaleffannu ta’uu keenya ibsaa, waamicha hawaasa oromoo fi kutaalee hawaasaa adda addaa maraaf dhiheessina.
1. Hawaasa Oromoo Maraaf,
Korri Sobaan fakkeessiidhaaf waamame kun kan duula dhabamsiisuu QBO fi diigumsa Maappii Oromiyaa irratti xiyyeefatee gantootaa fi bitamtootaan deemsifamaa jiru waan ta’eef bakka jirtan maratti akka dura dhaabbattan maqaa jaallan wareegamaniin waamicha isiniif goona.
2. Qeerroo fi Qarreef
Korri shiraa Maqaa ABOtiin gaggeefame kun qabsoo isin waggoota dheeraaf itti lubbuu keessan wareegdan bu’aa isaa rirmi qabsoo oromoo keessa dhokatee yakka dalagaa ture ammas aarsaa hin malle hawaasa keenya baasisuuf kan wixxirfatan ta’uu beektanii biyyaa fi bakka jirtannitti akka balaaleffattan cimsinee isin gaafanna.
3. Hojjettoota, Abbootii Gadaa Fi Abbootii Amantaa, akkasumas Ogeessotaa fi Hayyoota Sadarkaa adda addaa irra jirtaniif
Sirni Nama nyaataa Nafxxanyaa Dr.Abiyyi Ahimad Alii tiin gaggeeffamu diina innikaa QBO ta’uu isaa hubachuun shira badanii balleessuu QBO/ABO irratti aggaamamee gantootaa rirma qabsoo keessaatti karaa cufuun dhaaba lafee fi dhiiga ilmaan Oromoon ijaarame bira dhaabbachuun hulaa diinota QBO tti akka cuftan jabeessinee ni dhaammatna.
Injjifannoon Uummata Oromoof
Koree Konyaa Kaalgaarii